मेक्सिकोको प्युबला राज्यपाल मार्थ एरिका एलोओले हेलीकाप्टर दुर्घटनामा मरे – BRT NEWS
मेक्सिकोको प्युबला राज्यपाल मार्थ एरिका एलोओले हेलीकाप्टर दुर्घटनामा मरे
यस मेक्सिकोको पहिलो पटक शपथ ग्रहण गरिएको मेक्सिकन राज्यपाल र उनको सीनेटर पति प्युबलाको केन्द्रीय राज्यमा हेलीकाप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ।
प्युबुला गोभ मार्था एरिक एलोसो र सेन राफेल मोरेनो वेले ले जाने क्रममा चाँडै तल आईपुग्यो। दुई पायलटहरू मारिए। रिपोर्टहरू तेस्रो यात्री पनि मरे। अधिकारीहरूले भने कि हेलीकाप्टरले अज्ञात विफलताको सामना गरेको हुन सक्छ। एक अनुसन्धान खोलिएको छ। मुस्ल एलोसो 45 वर्षको उमेरमा प्यूबलाको पहिलो महिला परिषदको रूपमा 149डिसेम्बरमा हटेको छ। श्री Moreno, 50, 2011 र 2017 को बीच Puebla को राज्यपाल को रूप मा सेवा गरेको थियो।
दुर्घटनाको बारेमा के थाहा छ?
निजी स्वामित्व वाली अगस्ट हेलीकाप्टर मेक्सिको सिटीमा बाहिरिँदा एयर ट्राफिक नियन्त्रणको साथ सम्पर्क भयो र 10 मिनेट पछि लागेर दुर्घटनाग्रस्त भयो। सुरक्षामन्त्री एल्न्सोरो डरजोले भने। सोमबार बिहान 14:50 स्थानीय समय (20:50 GMT) दुर्घटना भएको मेक्सिकोको दोस्रो सबसे ठूलो शहर, प्यूबला नजिकैको सांता मारिया कोरोनगोको क्षेत्रमा
“यस समयमा, त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छ कि कारण कसरी [हेलीकाप्टर] काम गरिरहेको थियो सम्बन्धित छैन” श्री डार्जोले पत्रकारहरूलाई भने। राष्ट्रपति एन्ड्रेंस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले दुर्घटनाको कारणले गर्दा “सच्चाइ” स्थापित गर्न एउटा अनुसन्धान सुरु हुनेछ। एक ट्वीट (स्पेनिश मा) मा, उनले दुई राजनेताहरु को आफन्तहरुलाई “गहिरो संवेदना” व्यक्त गरे।
2011 मा गृहमन्त्री फ्रान्सिस्को ब्लेक मोरा सहित म्याक्सिको मेक्सिकोमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा धेरै हाई प्रोफाइलको मृत्यु पछि दुर्घटना भएको छ। बीबीसीको विल ग्रान्टले रिपोर्ट गरे। यस वर्षको सुरुमा, जब एक जनाको हेलीकाप्टरले भीडमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 13 मानिस मरे, यद्यपि मंत्री आफैले बाँचेका थिए, हाम्रो संवाददाता भन्छन्।
पीडितहरू को हुन्?
सुश्री एलोसो केन्द्र-दायाँ प्यान पार्टीको सदस्य थिए। जुलाईमा निर्वाचनमा, मेक्सिकोको सबैभन्दा आबादीका एक राज्यको शासनका लागि राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोरको पक्षमा उम्मेद्वार, मनुअल बार्सासालाई हरायो। नयाँ छनौट नभएसम्म पु्यूबलाको संसदले एक अंतरिम राज्यपाल नियुक्त गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोरको बायाँवादी मोरना पार्टीले मतदानमा व्यापक अनियमितता र धोका दिएको आरोप लगाएको थियो, र अन्तिम परिणाम एक निर्वाचन ट्रिब्युनल द्वारा प्रमाणित भएको थियो। उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुले आफुलाई आफुले आफुलाई आफुलाई माया गर्न चाहने बताएका छन्। उनीहरु आफुले आफुलाई माया गर्दछन्।
राफेल मोरेनो वेले सीनेटको प्यानको सदस्य थिए। केही विपक्षी नेताहरूले दुर्घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धानको लागि बोलाए। पायलटहरू क्याप्टे रोबर्टो पोप र पहिलो अफिस मार्को एन्टोनियो टावरका रुपमा चिनिन्छन्। यो अनुमान छ कि पाँचौं यात्री बोर्डमा थियो, तर कुनै विवरण जारी गरिएको छैन।
Next इंडोनेशिया सुनामी: कम से कम 222 मृत र 843 घायल अनक क्राकात्व ज्वालामुखी पछि समाप्त भयो